Nhungamiro yekutenga yechipiri-ruoko iPhone ino Kisimusi | IPhone nhau
Nhungamiro yekutenga yechipiri-ruoko iPhone ino Kisimusi
Inguva yezvipo, mushure meKisimusi Evha kuverenga kunotanga kusvika husiku hwaNdira 5 kusvika 6, apo Varume Vatatu Vakachenjera vanozviratidza pachavo nezvipo zvinotarisirwa kwazvo. Kunyangwe uko rudzi urwu rwetsika dzekutengesa dzisipo, misi iyi ndiyo inonyanya kukoshesa kutenga nekutengesa zvigadzirwa zvemagetsi. Saka, Tinoda kukupa akati wandei matipi kuitira kuti iwe usaruma mune zvingangoita hunyengeri kana zvasvika pakutenga iyo iPhone kifaa. Kuti uite izvi, isu tiri kuzokupa iwe akateedzana matipi aunofanirwa kugara uchitevedzera pasina kusarudzika kutenga yechipiri-ruoko iPhone.
Uye ndezvekuti isu hatifanirwe chete kutiza kubva ku "makoronyera" nemaPhones kubva kuzviito zvisiri pamutemo, isu kazhinji tinofanirwa zvakare kufunga nezvekusaziva kwevashandisi vazhinji zvinotungamira mukukanganiswa uye nezvinotevera matambudziko. Iyi ndeyangu mitemo mikuru kana ndichitenga yechipiri-ruoko iPhone:
Chenjera mamiriro akakwana: Chitsva hachina kufanana newe sezvachiri kwandiri. Usabhadhara chero chinhu usati waona zvese zvikanganiso uye nekugadzirisa mutengo kwavari.
Yekutsiva iPhone yakanaka sarudzo: Kana iwe ukawana iyo iPhone "kubva kutsiva" kana Yakagadziridzwa usavimbise hunhu hwayo, iwo anenge ari mitsva michina uye achave neashoma kupfeka uye kubvaruka.
Iyo vimbiso yakakodzera: Izvo zvakakosha kuti uzive kana iyo iPhone ichibva kuApple Chitoro, mune iyo kesi iyo ichave iine makore maviri-akananga warandi neApple. Kana iyo iPhone ichipa kubva kune imwe kambani kana kambani yerunhare, yeuka kuti unofanira kugamuchira inivhoyisi, nekuti gore rekutanga rakafukidzwa neApple, asi gore rechipiri unofanira kuenda wakananga kukambani uye havazokupinde pasina invoice yekutenga. .
Ngwarira pamitengo yakaderera zvakanyanya: Iwo "mabhizimusi" emhando iyi yezvigadzirwa haapo, kana akakupa iyo ingangoita nyowani iPhone 6 ye € 200 pane katsi yakavharirwa, usambofa wabhadhara pamberi.
Ita shuwa kuti iyo iPhone haina kubviswa kubva kuApple ID yemushandisi anoitengesa kwauri, kana kuti uchatambudzika kuidzosera. Saizvozvo, ita shuwa kuti mudziyo wagadzirira kumisikidza uye kwete kubiwa kana kukiyiwa neICloud.
Mafashama ndiwo marongero ezuvaUsati watenga, edza kuona iyo yepakutanga iPhone zvakadzama, yekutanga dhata iyo inozozvipa iko iko kushandiswa kwe microUSB pachinzvimbo cheMheni. Asi iwo ruzivo uye mhando yezvinhu, pamwe neiyo software, zvichajekesa kusahadzika kwako.
Kana vakatengesa kwauri vasina bhokisi uye zvishongedzo, chakanyanya kuitika ndechekuti chishandiso ichi chine hunhu hwehunhu hunopokana. Kukahadzika chero kutengesa kwezvigadzirwa pasina mabhokisi kana ma invoice.
Tiza kubva ku iPhone "chete neyakavhunika skrini" inova "zvakachipa kugadzirisa": MuApple Chitoro, iyo yekugadzirisa skrini inodhura anodarika 100 euros, uye "wechitatu-bato" vanopa vanogadzira zvinogadzirisa iyo inobata iyo ID ID kana inosanganisira manyepo ekupedzisira anopedzisa kupa matambudziko. Ive nekuchengetera zvakaputswa skrini uye zvidiki zvikanganiso, iyo kora inogona kunge ichidhura kupfuura imbwa.
Teerera kune iyo modhi uye maratidziro: Zviri nyore kukamurwa, iyo iPhone 5s haina kufanana neiyo iPhone SE, kune izvo isu tinogona kutarisa kumashure silkscreen, mune yazvino "S" mamodheru iwe uchawana iyo tsamba, sekunge uri muSE SE iwe ucha tsvaga iwo mavara maviri. Izvo zvakakoshawo kuti uende kumarongero efoni uye uone kuti une chekuchengetedza chavakativimbisa tisati tabhadhara, sezvo tichigona kubhadhara 64GB uye kugamuchira 16GB.
Ita shuwa kuti chishandiso hachiuye kubva kusatenderwa SAT kugadzirisa, izvo zvinongoerekana zvaita kuti garandi iwedzere uye zvakanyanya kuita kuti uve nematambudziko ekushanda nekuda kwezvikamu zvisina kubvumidzwa
Aya ndiwo matipi ekutanga aunofanirwa kugara uchiziva usati watenga wechipiri-ruoko iPhone kifaa. Chenjerera mapiritsi ari akasununguka akatenderedza Wallapop uye rombo rakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Nhungamiro yekutenga yechipiri-ruoko iPhone ino Kisimusi
Iyo Castaway Podcast Player, yemahara kwenguva shoma
Apple neLa Indian vanotanga kudzikamisa hukama hwebhizinesi